« FAHASALAMANA HO AN’NY REHETRA » : Notokanan’ny Filoha ny asa fanitarana ny sampana Vonjy Aina ao amin’ny CHUJRA – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 2:23
Nitombo avo roa heny ny fahafaha-mandray marary ao amin'ny Urgence.
Accueil/Politika/« FAHASALAMANA HO AN’NY REHETRA » : Notokanan’ny Filoha ny asa fanitarana ny sampana Vonjy Aina ao amin’ny CHUJRA
« FAHASALAMANA HO AN’NY REHETRA » : Notokanan’ny Filoha ny asa fanitarana ny sampana Vonjy Aina ao amin’ny CHUJRA
Fotodrafitrasa ho an'ny fahasalamana roa sosona no notakanan’ny Filoha Andry Rajoelina omaly 14 desambra 2021 dia ny fanitarana ny sampana vonjy aina ao amin'ny CHUJRA sy ny "salle de rééducation" eo anivon'ny Centre d'appareillage ao Befelatanana. Zava-dehibe ny fametrahana ireo fotodrafitrasa ireo, hoy ny Filoha, izay mifandrimbona amin’ny fanatanterahana ny Velirano fahadimy, dia ny fahasalamana ho an’ny rehetra tsy anavahana sokajin-taona.
Ny taona 1965 no niorina ny hopitaly CHUJRA etsy Ampefiloha. Ny taona 1997 no natsangana ny sampana Vonjy Aina. Raha tsiahivina anefa, niisa 700 000 ny mponina teto Madagasikara, raha ny antontanisa nivoaka ny taona 1993. Ankehitriny, efa tafiakatra 3 tapitrisa ny isan’ny mponina eto Antananarivo sy ny manodidina. Midika izany fa efa tsy mifanaraka amin’ny isan’ny mponina intsony ny fotodrafitrasa misy ao amin’ity hopitaly ity.
Taloha kelin’ny fidirantsika tamin’ny andiany voalohany tamin’ny Covid-19, nisy ny fitsidihan’ny Filohan’ny Repoblika ny tao amin’ny CHUJRA. Tamin’izany no nahitan’ny Filoha ny olana nisy teo anivon’ny hopitaly, ary nanambarany ny hanamboarana ny toerana. Vita tanteraka ny asa fanitarana ankehitriny, niaraka tamin’ny fotodrafitrasa vaovao hafa ihany koa, dia ny “salle de rééducation” eo anivon’ny Centre d’appareillage ao Befelatanana, izay samy notokanana omaly 14 desambra 2021 avokoa.
Niampy 27 ny fandriana
Mitohy hatrany, araka izany, ny fanatanterahana ny Velirano fahadimy nataon’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina dia ny fahasalamana ho an’ny rehetra tsy mifidy sokajin-taona. Nampitomboina avo roa heny ny toerana handraisana ny marary ao amin’ny sampana vonjy ainan’ny hopitaly CHUJRA Ampefiloha. Raha niisa 22 ihany ny fandriana nahafahana nandray marary tao teo aloha, dia nampiana fandriana 27 hafa izany ankehitriny. Nampiana sy nohatsaraina ihany koa ny fitaovana handraisana ireo marary, ary notolorana extracteurs d’oxygène sy moniteurs de surveillance ity sampan-draharaha ity. Nampatsiahy ny Filoham-pirenena fa ny fitsaboana voalohany eny amin’ireny sampana vonjy aina ireny dia maimaimpoana ho an’ny marary rehetra tsy ankanavaka. Izany dia tafiditra ao amin’ny nanokanana Fonds d’Urgence Sanitaire Nationale nosoniavina ny volana oktobra lasa teo. Raha ny eto amin’ity sampana eto amin’ny CHUJRA ity fotsiny no resahana dia efa maherin’ny telo arivo ny marary nisitraka izany hatreto.
Nomena fitaovana harifomba isan-karazany ihany koa ny Salle de rééducation eo anivon’ny Centre d’Appareillage de Madagascar ao Befelatanana. Manomboka izao dia azo atao tsara eny anivon’ny hopitalim-panjakana ny fampianarana manetsika indray ireo ratsambatan’ny olona tsy afaka manao izany noho ny antony maro toy niharan-ny voina ara-batana sy ireo paralysé noho ny fahatapahan’ny lalan-drà, sy ny sisa.
FEPETRA FISOKAFAN’NY ZOTRA: Nanamafy ireo fepetra ny eo anivon’ny minisitera
FAMERENANA NY HAREM-BAKOKA: Manangona ireo fanaky ny Praiminisitra Rainilaiarivony miparitaka ny Minisitera
TRANGA VAOVAO MAHERIN’NY ROA ARIVO: Nosokafana indray ny CTC-19 Alarobia, mila hamafisina ny fanajana fepetra
ARPHINE, ROLLY MERCIA, JOHARY RAVOAJANAHARY: Heloka tsotra no nanenjehan’ny fitsarana azy ireo